Manasongadina ny anjara asan’ny Cambridge Analytica tao anatin’ny fifidianana tany Trinidad & Tobago ny “The Great Hack’ an’ny Netflix · Global Voices teny Malagasy
Mandà ilay antoko politika voalaza ho nanakarama ilay orinasa
Voadika ny 15 Septambra 2019 17:04 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Shqip, bahasa Indonesia, Català, русский, Italiano, English
Pikantsary nalaina avy tao amin'ny lahatsary YouTube iray mampiseho topimaso avy tao amin'ny ‘The Great Hack’, horonantsary fanadihadiana mifandraika amin'ilay voalaza ho asa nataon'ny Cambridge Analytica nandritra ny fifidianana solombavambahoaka tao Trinidad sy Tobago tamin'ny 2010.
Namerina resaka an-tambajotra mikasika ny kolikoly sy ny famiraviràna ireo mpifidy tao Trinidad sy Tobago ilay horonantsary fanadihadiana vaovao an'ny Netflix, ilay “The Great Hack” — izay mamaritra antsipirihany ny fomba nahafahan'ny Cambridge Analytica sy ny orinasa nipoirany voalohany, ny vondrona SCL, namiravira fifidianana maro manerana ny tany.
Fantatra tsara ny Cambridge Analytica amin'ny fampiasana tsy ara-dalàna ireo rakitra an'olona an-tapitrisany ho an'ny tetika famarotana ara-barotra ao anatin'ny sehatry ny fampielezankevitra politika toy ny firotsahan'i Donald Trump tamin'ny fifidianana tamin'ny 2016 sy ny Fampieleznkevitra Fialàna ny Brexit. Saingy nanampy tamin'ny fisarihana ny fitondrantenan'ireo mpifidy tany amin'ireo Firenena any Atsimon'ny Tany ihany koa ilay orinasa, izay i Trinidad sy Tobago no ohatra tena miharihary indrindra ao anatin'ilay horonantsary fanadihadiana.
Tao anatin'ilay saimihetsika, milaza ny Cambridge Analytica fa nandaitra teo amin'ireo “Indiana” izany — izay midika fa niasa ho an'ilay antokon'ny Kaongresy Nasionaly Mitambatra maro an'isa Indiana (UNC) ry zareo — ary koa tamin'ilay vondrona antoko kely kokoa mpiaradia izay nitambatra mba handresena ny Hetsika Nasionalim-Bahoaka (PNM), izay manintona voalohany indrindra ireo mpifidy Afro-Tribagoniana.
Asehon'ny rakipeon'ny fanolorana ara-barotra nataon'ny Cambridge Analytica ny fomba niezahan'ilay orinasa handrisika ireo tanora, mainty hoditra mpifidy, tamin'ny alalan'ny hetsika fanentanana antsoina hoe “Do So”. Tamin'izany fotoana izany, ny ankamaroan'ny olontsotra nihevitra fa ilay fanentanana dia naka fotsiny aingam-panahy tamin'ny hetsik'i Percy Villafana, mpisotro ronono izay nanao fanamby nanakambana ny tànany roa nandà tsy namela ny hidirana ao an-tranony fony i Patrick Manning, praininisitra tamin'izany fotoana sady mpitarika ny PNM, nisintona ireo mpifidy tany amin'ny manodidina an'i Villafana talohan'ny fifidianana. Saingy nitondra hazavana vao mainka mampihoron-koditra kokoa teo amin'ilay toa hetsi-bahoaka ireo ampamoaka momba ny fomba nataon'ny Cambridge Analytica.
Mpitondrateny avy amin'ny Cambridge Analytica no nilaza tao anatin'ilay sarimihetsika fa nitetika ny “hampitombo ny tsy firaharahian‘ireo tanora sy mainty hoditra mpifidy izany mba handraisan'ity vondrona demografika ity ilay fandavana tsy hifidy ho toy ny “endrika fanoherana […] ny politika” ary tsy hipoitra any amin'ireo toerana fifidianana.
Nandresy tamin'ny fifidianana tamin'ny 2010 ny UNC:
Taorian'ny nipoahan'ilay tantara ratsy tao amin'ny Facebook nikasika ireo rakitra an'i Cambridge Analytica tamin'ny 2018, nandà tanteraka ny fahafantarany ny fisian'ilay orinasa sy ny fisian‘izay mety ho fifandraisana aminy rehetra ny UNC. Nafindran‘i Kamla Persad-Bissessar, mpitarika ny antoko UNC, ny fanilo, saingy taty aoriana dia nanaiky ny Kaongresim-bahoaka, iray tamin'ireo antoko politika maro nifehy ny governemantam-piraisantetika notarihan'ny UNC tamin'ny 2010, fa nisy resaka sy fifanarahana [niarahana] tamin'ny SCL”.
Hatramin'ny nivoahan'ilay horonantsary fanadihadiana tao amin'ny Netflix tamin'ny 24 Jolay 2019, naneho ny heviny avokoa ny vahoaka sy ireo mpikambana tao amin'ny governemanta, indrindra fa i Faris Al-Rawi, lehiben'ny fampanoavana, izay nanambara fa niresaka tamin'ireo mpisolovavan'i Christopher Wylie, ilay mpanitsoka ny Cambridge Analytica, ny biraony. Irian'ny governemanta ao Trinidad sy Tobago ny hijoroan'i Wylie ho vavolombelona eo anoloan'ny Kaomity Manokana Iraisana mba hanazavana ny resaka fikendrena bitika mitranga ao amin'ny firenena ary mba fanome porofo hoe iza tamin'ireo mpikambana tao amin'ny UNC no nandray anjara tao anatin'ny fanasaziana ilay politika stratejika nampiasain'ny Cambridge Analytica.
Maro tamin'ireo olona tao an-toerana sy erantany nahita ilay horonantsary fanadihadiana no naneho ny fahatalanjonany tamin'ny fahafahan'ilay orinasa namiravira ny fifidianana tamin'ny 2010 tamin'ny famporisihana ny olona “tsy hifidy”:
— Pratyasha Rath (@pratyasharath) 3 Aogositra 2019
Fanampiana mivadika izany — fotaka mba hanenana ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana izay nanao fahirano ny fihetsehampon'ny tanora ho kamo sy mpikomy. Tena mahaliana ny fomba nampandehanan'izy ireo izany.
— Nikkia (@nikkastar) 28 Jolay 2019
Tena ratsy sy mampalahelo! Ilay hery mahagaga sy manimba ananan'ny rakitra amin'ny fikolokoloana ny fomba famaritan'ny olom-pirenena iray ny tenany… zavatra iray mila jerena akaiky.
Toa tsy gaga ny hafa sasany raha nantsoina ny anaran'i Trinidad sy Tobago:
— Migz (@Migzdakid) 29 Jolay 2019
Tsy mahagaga ahy akory ny fisian'i Trinidad sy Tobago ao amin'ity resabe mikasika ny Cambridge Analytica ity
Na teo aza ny habetsahan'ireo gazety erantany azon'ilay fahafaham-barakan'ny Cambridge Analytica, tsy notaterina kosa ny fomba namiraviran'ilay orinasa ny dingana ara-pifidianana tany amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana na dia saika avy any Atsimon'ny Tany avokoa aza ny mpanfijan'ilay orinasa.
Nanamora ny asan'ny orinasa toy ny Cambridge Analytica ny tsy fananan'ny maro amin'ireo firenena ireo – ao anatin'izany i Trinidad sy Tobago – lalàna mihatra mikasika ny fiarovana an-tambajotra mba hisidina teo ambonin'ny radàra ary hampiasa ny rafitra:
— Jamie Bartlett (@JamieJBartlett) 21 Jolay 2019
Mivoaka amin'ity herinandro ity. Ny fizaràna mikasika ny asan'ny Cambridge Analytica tany Trinidad sy Tobago (fandrisihana ny tsy firaharahian'ireo mpifidy sasany) no tena zava-dehibe indrindra. Mahamenatra ary mbola mitohy foana ny fomba fiasan'ireo orinasa mpanadihady rakitra any amin'ireo firenena misy lalàna fiarovana ny fiainana manokana izay tsy mivelatra loatra.
Ny fanantenana dia ny hoe, raha sy rehefa tonga any Trinidad sy Tobago i Wylie, tsy hanome fotsiny porofona fifandraisana eo amin'ireo tomponandraikitra lehibe ao amin'ny UNC sy ny Cambridge Analytica ihany izy fa hanazava ihany koa ireo mpanapa-kevitra ara-politika eo amin'ny firenena mikasika ny vokatry ny fikendrena bitika indrindra ety amin'ny Aterineto. Mbola anivon'ny resaka ifanaovan'ireo mpisolovavany sy ny Biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana ilay fitsidihana mety ho ataon'i Wylie.